China 330kV double loop Y-type line tower Manufacture and Factory | XY Tower
330kV kaviri loop Y-mhando mutsetse tower
PaGore ra2008, XY Tower yakamiswa iyo yaitarisa kugadzira shongwe yesimbi. XY Tower yakabatsirwa kubva kune yakawanda mutengi sosi uye yakasimba yekugovera cheni yeBoka, kuvandudzwa kweXY Tower kwave nekukurumidza mumakore achangopfuura. Mazuva ano, XY Tower inopa zvinopfuura zana seti shongwe yesimbi gore rega rega. Vatengi vanovhara anopfuura matunhu makumi maviri eChina nemisika yemhiri kwemakungwa. XY Tower ndiye mutengesi akakodzera wemapoka akawanda eGlobal 500 anosanganisira grid yehurumende, bhanhire rekumaodzanyemba, China energy engineering Group, China telecom, Huawei etc. Kunyange zvazvo zvigadzirwa zvedu zvichibudirira kushandiswa munyika yeASEAN, Africa neAmerica makondinendi.
Zvakapfuura: 330kV kaviri loop terminal tower
Zvinotevera: 330kV single loop Y-mhando yekufambisa shongwe